Zvaungaita Kuti Usataura Mashoko Anorwadza | Mazano Okubatsira Mhuri
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bulgarian Cebuano ChiSutu (Lesotho) ChiTetun Dili Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Ewe Fijian Finnish French Georgian German Greek Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Lithuanian Macedonian Malagasy Malayalam Mutauro Wemasaini wokuAustralia Myanmar Norwegian Oromo Polish Portuguese (Brazil) Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Thai Tigrinya Tsonga Turkish Twi Ukrainian Urdu Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
MAZANO OKUBATSIRA MHURI | WANANO
Zvaungaita Kuti Usataura Mashoko Anorwadza
Nguva dzose panomuka dambudziko, iwe newawakaroorana naye munotukana muchinakurirana mhosva. Mumba menyu kutukana ndiwo atova magariro here?
Kana zviri izvo zviri kuitika mumba menyu unogona kuita kuti dambudziko iri ripere. Asi chokutanga unofanira kuongorora kuti chii chinoita kuti mutukane, uye nei zvakanaka kuti ugadzirise zvinhu.
Marererwo. Varume nevakadzi vakawanda vakarerwa mumhuri dzaiva dzizere kutukana. Murume kana kuti mudzimai kana kuti vose vari vaviri vanogona kutevedzera matauriro avaiona achiitwa nevabereki vavo.
Dzimwe mhando dzezvinovaraidza. Mafirimu nemapurogiramu anosetsa epaTV anobudisa vanhu vachitaura mashoko akaipa uye vanhu vachidambuka mbabvu nokuseka zvokuti vanoona vanozopedzisira vava kuona sokuti hapana chakaipa nokutaura mashoko akaipa iwayo.
Tsika. Mune dzimwe nzvimbo zvinonzi kuti unzi uri murume unofanira kunge uchiita sebhuru kana kuti vanhukadzi havafaniri kubvuma kutyisidzirwa nevanhurume. Murume nomudzimai pavanenge vasiri kunzwisisana, kana vakava nemafungiro iwaya zvinoita kuti vatange kuonana semhandu panzvimbo pokuti vaise misoro pamwe vataurirane zvakanaka kwete kukandana mashoko.
Pasinei nokuti chii chakonzera kuti mutukane, mashoko anorwadza ndiwo mviro-mviro yokurambana uye zvinokonzerawo kuti urware. Vamwe vanotaura kuti kutukwa kunorwadza kudarika kurohwa. Somuenzaniso mumwe mudzimai aigara achitukwa uye achirohwa nomurume wake anoti: “Ndaiona zviri nani kuti ndirohwe hangu pane kutukwa.”
Zvii zvamungaita kana imba yenyu yava kuparara nemhaka yokutukana?
Iva anonzwira tsitsi. Imboedza kuzvifungidzira uri kudivi romumwe wako, uye edza kufunga kuti mashoko ako anoita kuti anzwe sei. Kana zvichiita, funga zvimwe zvakamboitika zvakaita kuti mumwe wako arwadziwe nezvawakataura. Mashoko ako angava aiva nomusoro asi funga nezvokuti mumwe wako akanzwa sei pawakazvitaura. Ungafunga here mashoko akanaka awaigona kunge wakataura? Bhaibheri rinoti: “Mhinduro, kana iri nyoro, inodzora kutsamwa, asi shoko rinorwadza rinomutsa hasha.”—Zvirevo 15:1.
Cherechedza zvakanaka zvinoitwa nedzimwe mhuri. Kana matauriro aunoita akavhiringidzwa nevanhu vawaiona, tsvaka vanhu vanoita zvakanaka. Teerera vakaroorana vanotaudzana zvakanaka wovatevedzera.—Zvinotaurwa neBhaibheri: VaFiripi 3:17.
Funga nezvekudanana kwamaiita kare. Kazhinji kutaura mashoko akaipa kunotangira mumwoyo. Saka edza kufunga zvinhu zvakanaka zvinoitwa nemumwe wako uye wedzera kumuda. Fungai zvinhu zvamainakidzwa nazvo muri pamwe chete. Tarisai mapikicha enyu ekare. Chii chaiita kuti munakidzwe? Unhu hupi hwakaita kuti mudanane?—Zvinotaurwa neBhaibheri: Ruka 6:45.
Taura mashoko okuti “Ndino. . . ” Panzvimbo pokushora mumwe wako, muudze kuti iwe unonzwa sei nezvaanoita. Somuenzaniso, kutaura kwakanaka ndekwokuti: “Ndinoona sokuti haundikoshesi paunoita zvinhu zvako usingandibvunziwo.” Kuita izvi kuri nani pane kutaura kuti: “Ndozvaunongoita haumbondibvunzi paunoita zvinhu zvako!”—Zvinotaurwa neBhaibheri: VaKorose 4:6.
Ziva pokunyarara. Kana hasha dzikakwira uye mukaona kuti mava kutukana, zvingava zvakanaka kuti muzokurukura nyaya yacho pane imwe nguva. Kazhinji hapana chakaipa nokubva panzvimbo kana kutaudzana kwacho kusisina kumira zvakanaka, kusvikira zvinhu pazvinenge zvadzikama.—Zvinotaurwa neBhaibheri: Zvirevo 17:14.
Kazhinji kutaura mashoko akaipa kunotangira mumwoyo
“Varume vanofanira kuda madzimai avo semiviri yavo.”—VaEfeso 5:28.
“Mudzimai anofanira kuremekedza murume wake kwazvo.”—VaEfeso 5:33.
“Kupopota nokutuka ngazvibviswe kwamuri.”—VaEfeso 4:31.
CHII CHINONZI “KUTUKA”?
Bhaibheri rinoti: “Kupopota nokutuka ngazvibviswe kwamuri.” (VaEfeso 4:31) Sei Pauro akasiyanisa “kupopota” “nokutuka”? Shoko repakutanga-tanga rakazoshandurwa kuti “kupopota” (muchiGiriki, krau·geʹ) rinoreva kukwidza inzwi. Izvi zvakasiyana neshoko rokuti “kutuka” (muchiGiriki, bla·sphe·miʹa) iro rinorondedzera zviri mumashoko anenge ataurwa. Izvi zvinorevei? Zvinoreva kuti munhu anogona kutuka asi asiri kupopota. Chiripo ndechokuti, kutuka kutaura mashoko akaipa, kana kuti kutaura zvinoita kuti munhu anyadziswe uye izvi hazvinei nokuti uri kuzvitaura nenzwi riri pasi.
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Zvaungaita Kuti Usataura Mashoko Anorwadza